Calculate Linux: Sabayon နဲ့ Gentoo အကြားပေါင်းစည်းခြင်း (fedora 19 လည်းထွက်လာတယ်) | Linux မှ
Calculate Linux: Sabayon နဲ့ Gentoo အကြားပေါင်းစည်းခြင်း (fedora 19 လည်းထွက်လာတယ်)
ဒိုင်ယာဇီပန် | | ဖြန့်ဝေ
Ubuntu ကိုသုံးခြင်းနှင့် Debian ကိုအသုံးပြုခြင်းသည် Sabayon ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့် Gentoo ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အနည်းငယ်သာရှိသည်။ တစ်ဖက်တွင် Gentoo သည်အရာအားလုံးကိုစုစည်းထားသည့် (အနည်းဆုံး kernel ပင်) တည်ရှိပြီး၎င်းသည်အရင်းအမြစ်ကုဒ်ပေါ်တွင်အခြေခံထားသည့် minimalist distro ရှိသည်။ Sabayon သည် Gentoo ကိုအခြေခံထားသော်လည်းလုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်စက်ကိုအလုပ်လုပ်စေရန်အရာအားလုံးနှင့်ပါ ၀ င်ပြီး၎င်းတွင်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် binary package (Entropy) လည်းရှိသည်။
ငါမကြာသေးမီကအိမ်တွင်းနှင့်စီးပွားရေးအတွက်နှစ် ဦး စလုံးရည်ရွယ်ချက်များအတွက် Gentoo (တည်ငြိမ်သောဌာနခွဲ, အနည်းငယ်စမ်းသပ်စရာအချက်အချာကျ) အပေါ်အခြေခံပြီးရုရှား distro VirtualBox Calculate Linux ကိုမကြာသေးမီကငါကြိုးစားခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့်ငါ XFCE နဲ့ဗားရှင်းကိုစမ်းကြည့်ခဲ့လို့မယုံနိုင်လောက်အောင်ပဲ။ ငါ Sabayon ၏လွယ်ကူခြင်းနှင့် Gentoo ၏စွမ်းရည်များအကြားတစ်ဝက်ဖြစ်သကဲ့သို့ငါခံစားရတယ်။ Installation သည် graphical နှင့်လွယ်ကူပြီး auto-partition option ကို (သင် gparted နှင့် manually partition မလုပ်လိုလျှင်) နှင့်အသုံးပြုသူများကိုဖန်တီးသောအခါအသုံးပြုသူပိုင်သည့်အုပ်စုများကိုစာရင်းပြုသည်။ ထို့အပြင်၎င်းအတွက်လမ်းညွှန်အနေဖြင့်၎င်းတို့တွင်ပါ ၀ င်သည့်အုပ်စုအချို့နှင့်အတူ already ည့်သည်အသုံးပြုသူလည်းပါဝင်သည်။
Calculate သည် Portage ကိုအသုံးပြုသည်။ သို့သော် packets များကိုရှာဖွေရန် (ဥပမာအားဖြင့်သင်ရှာဖွေနိုင်သည်) ဥပမာ eix command ကဲ့သို့သောအလိုအလျောက် tools များသို့မဟုတ် Calculate overlay ကို update လုပ်သော eix-sync command, ထို့နောက် Portage ပြီးနောက်ရှာဖွေရန်အတွက် local cache ကိုညှိသည်။ အစီအစဉ်များ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ portage graphic frontend နဲ့မပါဘူး။
calculate ကို KDE နှင့် XFCE (GNOME ပါ ၀ င်မှုရပ်စဲသည်) နှင့် Desktop ဗားရှင်း၊ စကတ်ဗားရှင်း (အနည်းဆုံး၊ desktop နှင့်ဆာဗာများအတွက်) နှင့် Media Center ဗားရှင်းတွင်လာသည်။
THE ROTARY IN PAAAAAAAAAAAAAAAAA ကို !!!!
Fedora 19 ထွက်လာပြီ
ဒီ link မှာအပြောင်းအလဲများ
ငါမှတ်ချက်ပေးချင်တယ် အဆိုပါ microkernel မင်းရဲ့အကူအညီလိုတယ် လာမယ့်ပြပွဲမှာပြောဖို့ပြောမယ့်ဟောပြောပွဲတွေလိုတယ်။ ဒါက X.org, Wayland နဲ့ Mir အကြောင်းပါ။ သင်စိတ်ဝင်စားပါက elmicrokernel@gmail.com သို့စာရေးပါ။ ကျနော်တို့သာအဲဒီမှာတောင်းဆိုမှုများကိုတက်ရောက်ရန်သွားနေကြသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » ဖြန့်ဝေ » Calculate Linux: Sabayon နဲ့ Gentoo အကြားပေါင်းစည်းခြင်း (fedora 19 လည်းထွက်လာတယ်)
ငါ့အတွက်စိတ် ၀ င်စားစရာအကောင်းဆုံးကဒါဟာရုရှား distro ပါ။ တရုတ်ရောandစတြေးလျလည်းမသိဘူး။
Linux Deepin သည်တရုတ်ဖြစ်သည်
Linpus သည်အာရှစျေးကွက်အတွက်ကျွမ်းကျင်သောဖြန့်ချီမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၂၀၀၉ မှာ linerus operating system နဲ့အတူလာတာကြောင့် ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာ Acer က ၅၆၃ လက်ပ်တော့ပ်ဝယ်လိုက်တယ်။
Rosa Linux နှင့် ALT Linux (Mandriva ကို အခြေခံ၍ Mageia ကဲ့သို့) သည်ရုရှားလူမျိုးများဖြစ်သည်။
Debian သည်၎င်း၏အသိုင်းအဝိုင်းသည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖြစ်သောကြောင့်ရုရှားလည်းဖြစ်သည်။ xD
ROSA Linux သည်နောက်ဆုံးထွက် Mandriva မူကွဲကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ ရုရှားလည်းဖြစ်သည်။
ဤနေရာတွင်ပျော်ရွှင်စရာမှာscröndingerနှိုင်းယှဉ်ချက်ကိုမည်သူအမှန်တကယ်သိပြီး၎င်းကို Fedora နှင့်၎င်း၏အမည်ထက် ကျော်လွန်၍ ပေါင်းသင်းခြင်းကိုစီမံခြင်းဖြစ်သည်။
ကောင်းပြီ၊ သင့်မှာလည်းနှိုင်းယှဉ်ချက်တစ်ခုရှိမယ်ဆိုရင်၊ အထူးသဖြင့် ၁၈ ကိုသုံးပြီးအဲဒီအတွက်ကြောင့်ထွက်ပြေးခဲ့မယ်ဆိုရင် ... ဆိုလိုတာကသင်ဖွင့်မယ့် (version 18) Fedora သေဆုံး၊ မသေသည်ကိုသင်မသိနိုင်ပါ။ 😛
စကားမစပ်၊ မှတ်စုကိုသူတို့ဘယ်လိုရပ်လိုက်တယ်ဆိုတာကိုကြောင်နဲ့ကြော်ငြာထားတာကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်။ xD
jojojojojo နှင့်သူ၏မိခင် xD သည်ကျွန်ုပ်ရှာဖွေသောအရာကိုကြည့်ရှုရန် ၂ ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်သည်
Fedora ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲလိုသူများအတွက်ဆာဗာများမပြည့်စေရန် torrents ဖြင့်ပြုလုပ်ပါ။
ငါ hahahaha ပုံနှင့်အတူသေဆုံး!
# ငါ ၀ န်ခံလိုက်ရတာက Fedora 19 နာမည်ကိုကျွန်တော်တကယ်သဘောကျတယ်၊ ဒါပေမဲ့သူတို့ဒီမှာဒီမှာဟားခါးဟက်ဟက်ဟေ့ဟေ့ဓာတ်ပုံတွေကြိုက်တယ်
ရေချိုးခြင်းခံရသော်လည်း“ အခြေခံထားသော်လည်း” ဖြစ်သင့်သည်။
Boludo, ငါ LOLZ ကြောင်ကိုတွေ့တော့ငါသေလုနီးပါးဘာ hdp !!!! x'D
Angel escobar ဟုသူကပြောသည်
ကျနော့်အမြင်တွင် Sabayon သည် Gentoo ၏စွမ်းအားကိုမဆုံးရှုံးစေပါ။
Angel Escobar အားပြန်ပြောပါ
ရရှိနိုင် Cyanogenmod 10.1 တည်ငြိမ်သော
မတူကွဲပြားမှုများအတွက် Linux သို့မဟုတ်ဆန့်ကျင်ခြင်းအတွက်?